Kachin Duwa: ကချင်လူမျိုး သတ်တဲ့ ဗမာ သူရဲကောင်း များ စာရင်း ထွက်ပြီ။
King Hsur Awn, အဂ္ဂမဟာ ချွတ်တားပေါက်ဖော် အာနိုးဖိုးထောင်, Maung Myo and 28 others like this.
Aye Chan နဲတာကွာ ဓိထက်များများလေး
Tun Min အဒီအစိုးရနဲ့ အချို့ အစွမ်းရောက် တွေက မြန်မာနိုင်ငံက အနည်းစုဖြစ်တဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာနဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာတွေကို နည်းအမျိုးမျိုး နဲ့ တိုက်ခိုက် န
Tun Min နေတာပါ
La Bang ထားလိုက်ပါမင်းတို့ဗမာကမှတရုတ်တို့ကုလားတို့ကိုဗမာမှုပြုပြီးဗမာနာမည်းနဲ့တရုတ်စကားပြောကုလားစကားပြောနဲ့မျိုးပြုတ်မှာကဗမာတွေပါတို့ကချင်ကြိကိုမြင်ပြီးဗမာနဲ့ဆက်ဇရားမရှည်ချင်တာအောက်ဗမာပြည်မှာတရုတ်ဘုံကျောင်းနဲ့ကုလားဗလီများဒီထက်များပွားလာပါစေကြောင့်ဆုမွန်ကောင်းလည်းတစ်ပါတည်တောင်းပေးပါတယ်ဗျား
Elias Cung Tatmadaw Terroristaward.
Chitthu Sky လူသတ်သမားဆုလို့ ရေးပြီးပေးရမှာလေ..ာဟာဟာဟာဟးသူရဲကောင်းဆုတဲ့။မင်းတို့ ကိုအခြောက်နဲ့ နှိုင်းရင်တောင်အခြောက်သိက္ခာကျအုံးမယ်ကွာထွီးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
Posted by Du Wa at 8:45 AM
သူရဘွဲ့ နှင့် သူရဲကောင်းမှတ်တမ်းဝင်တံဆိပ် ဆုရတဲ့ အထက်က စစ်သားတွေဟာ တိုက်ပွဲမှာသေပြီးသား စာရင်းတွေနေမှာပါ။ နာရေးသတင်းမှာ ပါပြီးသားနာမည်နဲ့တူနေသလိုပဲ.....